နီးပါးအသီးအသီးကဤတစ်ရှိပါတယ်တူသောဒါဟာပုံရသည် ကော်ဖီဆိုင်, ငါး စားသောက်ဆိုင်, သို့မဟုတ်ယင်း၏မြေညီထပ် on bar, သငျသညျမွငျနိုငျဒီတော့သင်တစ်ဦး pastis ကိုနို့အဖြစ်ပြင်ပတွင်ထိုင်ခုံနှင့်အတူဤဝိဇ္ဇာအတတ်အားမွို့၌အသက်တာကိုဆက်ရေး.
စက်မှုလုပ်ငန်းသည်ခေတ်မီသောသင်္ဘောကျင်းများမှဆိပ်ကမ်းများသို့ရှည်လျားစွာရွေ့ပြောင်းခဲ့သည် မွောကျ, နှင့်အဟောင်းဆိပ်ကမ်းကိုအတွက်စက်လှေအများစုအပျော်အပါးအဘို့ဖြစ်ကြ၏.
Marseilles တည်ရှိသည် 773 တောင်ဘက်ပဲရစ်၏ကီလိုမီတာ. မာဆေးမှပဲရစ်ရထားသွားလာ trips အလွန်လွယ်ကူသည်. Paris မှ Marseilles သို့တိုက်ရိုက်ရထားသည်ခရီးတစ်ခုအတွက် Paris Gare de Lyon မှထွက်ခွာသည် 3.5 နာရီ. သငျသညျမာဆေးအပေါ်ခရီးသွားလာနေတယ်ဆိုရင် နွေရာသီတနင်္ဂနွေ ကျနော်တို့အကြံပြု ရထားလက်မှတ်တွေ booking ကြိုတင်မဲအတွက်ကောင်းစွာ.
မြစ်အားဖြင့်တည်ရှိပြီး သူ၏, Rouen သည်ပဲရစ်နှင့်နီးကပ်သောနေ့ရက်ဖြစ်ပြီးနော်မန်ဒီ၏အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်ဖြစ်သည်. ၏ "မြို့ချစ်စနိုး 100 ခေါင်းလောင်းတာဝါတိုင်”. Rouen တစ်ဦးရှိပါတယ် ကြွယ်ဝသောသမိုင်း, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပြတိုက်, နှင့်ကောင်းမွန်သော အစာအိမ်ဆိုင်ရာပညာ.
ယခု, Rouen ရဲ့လမ်းများအများအပြားလမ်းသွားလမ်းလာရှိနေဆဲ, မြို့မှတဆင့်တစ်အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်အမှန်တကယ်အချိန်ပြန်နင်းကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ခံစားရကြောင်းအဓိပ္ပာယ်. အဘယ်သူမျှမကားများ, cobbled လမ်းကြောင်း, တစ်ဆိပ်ကမ်းဧရိယာ, ပင်တစ်ရှေးဟောင်းခရိုင်: ချစ်ရမယ့်? ဇွန်လမှစက်တင်ဘာလအတွင်း Rouen သို့ သွား၍ အခမဲ့မီးများကိုသင်ပင်ရလိမ့်မည် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာပြသ နေဝင်ချိန်နှင့်ဆည်းဆာဝင်ချိန်.
လိုင်ယွန်၏တစျခုဖွစျသညျ ပြင်သစ်တွင်အလှဆုံးမြို့များကို, နှင့်ကဲ့သို့သောခံစားရန်လှုပ်ရှားမှုများတစ်များပြားရှိပါတယ်. Fourbiere ဟေးလ် ကမ်းလှမ်းမှု လှပသောမြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များ မြို့သူမြို့သားများနှင့်ကသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစတင်ရန်တို့သည်ကြီးစွာသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. စူးစမ်းပါ။ Vieux လိုင်ယွန်, မြို့တော်ရဲ့သမိုင်းဝင်စင်တာနှင့်၎င်း၏ရိုက်နှက်မှုနှလုံး, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှင့်အတူ အလယ်ခေတ်နှင့်ခေတ်ဆန်း ဗိသုကာနှင့်တစ်ဦးကောင်းတဲ့လေထု. လိုင်ယွန်ရဲ့နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားအစားအစာများ၏အရသာရတဲ့ပြီးနောက်, အဲဒါကိုဦးရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည် အဆိုပါကျွန်းဆွယ် (လိုင်ယွန်ရဲ့မြစ်-ခညျြနှောငျကျွန်းဆွယ်) ပိုပြီးလှပဗိသုကာနှင့်အချို့ ကောင်းတဲ့စျေးဝယ်.
လိုင်ယွန်တည်ရှိသည် 463 ပဲရစ်ကနေကီလိုမီတာ, ဒီနေ့ပဲရစ်မြို့ကနေခရီးစဉ်ကပဲရစ်မြို့နဲ့သိပ်ပြီးကွဲပြားခြားနားတဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်. လိုင်ယွန်မှပဲရစ်ရထားသွားလာ trips မြန်. ပဲရစ်လိုင်ယွန်ခွင့်မှလေ့ ပဲရစ် Gare de Lyon တစ်ဘို့အလုပ်ချိန်နာရီ ခရီးသွားခြင်း လှည့်ပတ်၏2နာရီ, ရထားပေါ်တွင်မူတည်.
La Rochelle တည်ရှိသည် 469 ပဲရစ်ကနေကီလိုမီတာ. ပဲရစ်မှ La Rochelle ရထားဖြင့်သွားရန်လွယ်ကူသည်. တိုက်ရိုက် TGV ပဲရစ် Gare de Montparnasse ကနေစွန့်ခွာခြင်းနှင့်သာရှိ La Rochelle မှပဲရစ်သို့လင့်ထားသည် La Rochelle ဖို့လေ့3နာရီ.
Deauville အဆိုပါနော်မန်ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်တွေ့နိုင်သည်, Trouville နှင့်အနောက်တောင်ဘက်ကပ်လျက် Honfleur. 'Normandy Riviera' Deauville ၏အစိတ်အပိုင်းသည်လှပသောပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့ဖြစ်သည်. ဒါဟာအကြီးကမ်းခြေရှိပါတယ်, ကြီးစွာသောတိုက်ဆောင်, ကြီးမြတ်ဆိုင်များ, ကာနှစ်စဉ် ရုပ်ရှင် ပွဲတော်. ယင်း၏ကျော်ကြားသောပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုဖော်ပြရန်မ, ဂေါက်ကွင်း လောင်းကစားရုံနှင့်. သင်ပိုမိုဘာကိုလိုချင်တာနိုင်?
Deauville သည်ပဲရစ်မှတစ်ရက်ခရီးစဉ်အတွက်အလွန်ကောင်းသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်သည်, နပိုလီယံ၏တတိယအစ်ကို၏ရူပါရုံအဖြစ်ဘဝကိုစတင်ခဲ့သည်. Trouville ၏ကပ်လျက်မြို့ကနေ, သူသည်ရွှံ့နွံများနှင့်သဲခုံများကိုဖြတ်ပြီးပြေးလမ်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်. ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းနှင့် ပင်လယ်ကြားတွင် အံဝင်ခွင်ကျရှိသော အိမ်ကြီးများကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး Deauville ကို မွေးဖွားခဲ့သည်။.
Deauville တည်ရှိသည် 220 ပဲရစ်၏အနောက်ဘက်ကီလိုမီတာ. ရထားသွားလာပဲရစ် Deauville မှခရီးစဉ်များကယ့်ကိုလွယ်ကူပါတယ်. ပါရီမှ Deauville သို့တိုက်ရိုက်ရထားများထွက်ခွာသည် ပဲရစ်စိန့် Lazare အလုပ်ချိန်နာရီရထားဘူတာရုံနှင့်ရထားခရီးကြာရှည်ခံ2နာရီ.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 ပဲရစ်ကနေရထားဖြင့်ခရီးသွားနိုင်ရန်အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fday-trips-travel-train-paris%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#နေခြည်	#ပြင်သစ်ဟိုတယ်များ	#ဆေးရုံ	#အမြန်လမ်းမကြီး	#ကွမ်းခြံကုန်း	europetravel	ရထားခရီးရှည်များ	ရထားအကြံပေးချက်များ	ရထားခရီးသွား